I-50 YEENWELE EZILUNGILEYO KUNYE NEENWELE ZEENWELE ZAMADODA NGO-2021 - IINWELE ZAMADODA
I-50 yeeNwele eziPhambili zaMadoda
Eyona Iinwele Zamadoda I-50 yeeNwele eziPhambili zaMadoda
Ukuba ukhangela iinwele zamva nje, zezona zinwele zilungileyo zamadoda zokuba zifike ngoku zintsha kwiindawo zokucheba iinwele ezishushu kwihlabathi liphela. Uninzi lwabafana abanayo i…
Ukuba ukhangela iinwele zamva nje, zezona zinwele zilungileyo zamadoda zokuba zifike ngoku zintsha kwiindawo zokucheba iinwele ezishushu kwihlabathi liphela. Uninzi lwabafana abanalo ixesha lokuphanda kwaye bafumane i-hairstyle entsha. Nge-undercut okanye i-fade emacaleni kwaye ifutshane ukuya kwiinwele ezinde ngaphezulu, zininzi iindlela zokusika ezipholileyo kunye nezitayile onokukhetha kuzo. Ukuba ufuna ugqozi kunye nemibono, nazi iinwele ezithandwa kakhulu emadodeni ukuzama kulo nyaka. Ukusuka kwiklasikhi ukuya kwizitayile zangoku zokucheba iinwele ezinde, eziphakathi kunye nezifutshane, ezona nwele ziphezulu ze-2021 zibonelela ngenkangeleko entle wonke umntu anokuyinxiba ngesitayile.
1.6Izinwele eziKhuselweyo eziBuyile
1.13Izinwele ezinde phezulu kunye neeNdawo eziMfutshane kunye neendevu
1.17Imibala yeNwele epholileyo
MbiniIinwele ezaziwa kakhulu zamadoda
2.1Ukudibanisa okubhaliweyo okungaphezulu kokuphela
2.3Iinwele eziMessy eziMdaka ngeMid Fade
2.4Izinwele ezinombala oMdaka ngeSikhumba esiPhezulu esiFipileyo
2.5Imfutshane emfutshane enefreyimu enefreyimu ephantsi
2.6Ukuhla okuphezulu okuphelileyo kunye neQuiff
2.7Ulusu olusezantsi luphela kunye noMgca oPhezulu kunye noMyalezo oPhezulu
2.8Ikama ngaphaya kunye Part kunye Fade High
2.9Ukubhrasha phezulu kwi-Fringe nge-Mid Bald Fade
2.10I-Textured Slick Buyela nge-Undercut
2.11Crop Phezulu Ukucheba iinwele ngokuPhela okuphezulu
2.12Ikama ngaphaya kwePompadour
2.13Ukuhla kweFowunil ephantsi ngeMilo ePhakamileyo kunye nokuGqwetha
2.14Iinwele ezinde eziBrushwe ngasemva nge-Undercut
2.15Iinwele ezi-Wavy eziKhuselweyo eziPhezulu kunye neRazor High Fade
2.16Icandelo Elinzima elinokuLuphela okuPhakamileyo kunye neendevu ezigcweleyo
Ukuba ucinga ukufumana ukusika okutsha kwaye ufuna isitayile esiza kukufumana uqaphele, ezi iinwele ezimangalisayo yindlela yokuhamba. Ukuqala, sibona ngaphezulu ubude obuphakathi kwaye iinwele ezinde yamadoda avumela intshukumo kunye nokuhamba. Ezi ntsingiselo zipeyintwe ngokugqitywa kwendalo okungaphezulu kokujongeka, ukubonakala komzimba. Iimveliso zeenwele ezifanelekileyo zokufezekisa oku kubandakanya ukukhanya ukuya kumbindi wokubamba ii-pomades kunye ne-waxes ezinikezela ukugqitywa kwe-matte. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba iinwele ezimfutshane ziphumile. Izinwele ezimfutshane zamadoda iyakuhlala ipholile kwaye ithandwa kuba zisikiwe zicocekile, zintsha, kwaye kulula ukuba zizitayile. Kwaye iinwele ezimfutshane zilungele iinwele ezijijekileyo, ezi-wavy kunye nezinzima.
Inkqubo ye- ukuphela kweenwele yinxalenye yazo zonke iinwele ezipholileyo zamadoda kule mihla. Ngeentlobo ezininzi ezahlukeneyo zokuphela - isezantsi , phakathi , phezulu , ulusu , ukuhla , Ukuqhuma, i-razor-abafana banokucela iinwele zabo ngenani leenwele. Kwaye ngelixa abafana besebenzisa amagama aphelayo kunye netaper ngokungafaniyo, ziindidi ezimbini ezahlukeneyo zokuphela.
Ukwahlula phakathi kokuphela kunye ne-taper kukuba i-fade idibanisa kwisikhumba ngelixa i-taper iyanciphisa iinwele zifutshane. Ngapha koko, ukucheba kweenwele ezisezantsi kwamadoda kubandakanya ukubuna nje kwicandelo elisezantsi leenwele, ngaphezulu ngentla komgca weenwele nakwindlebe. Okwangoku, ukuphela okuphezulu kuqala ukusondela phezulu nge-buzz ebonakalayo emazantsi entloko. Okokugqibela, i ulusu okanye inkqayi inwele inwele ibuzzed down to zero kwaye ibhengeza isikhumba sasekhanda.
Inkqubo ye- iinwele zetaper zakudala zombini ziyasebenza kwaye zihamba kakuhle. Uphawu olwahlukileyo lokucheba iinwele ziinwele ezithi chu ngokuthe ngcembe ziye ezantsi kwentloko kodwa ishiye ubude obungaphezulu kokufiphala.
Nge-taper, iinwele ezimfutshane zinokunikwa i-twist enesitayile kwaye zigcineke ngakumbi, zisenza ukuba zilungele icandelo lesiko okanye izitayile ezinde. Ngesi sizathu, i-taper isethwe ukuba ibe yenye yezona zininzi iinwele ezithandwayo zamadoda .
Inkqubo ye- iinwele ezingaphantsi sele iqhelekile njengokuphela. Sika ngokufutshane kwaye uphakame kakhulu emacaleni nasemva, i-undercut ibonelela ngokuchaseneyo okuninzi. Iimpawu zeenwele zamva nje zibonisa ukuba i-undercut idityaniswa ne-messy, iinwele ezilungisiweyo ezinje nge ikama ngaphezulu , ifeksi , quiff kunye nomphetho omde. Njengenye yezona zilungileyo iinwele zamadoda aneenwele ezingqindilili , buza i-barber yakho ukuba i-undercut kutyelelo lwakho olulandelayo.
I-quiff iyaqhubeka nokuba yenye yezona zinwele zifutshane ukuya kuthi ga kubude obuphakathi kubantwana. Kubhalwe umyalezo nge matte pomade ngenkangeleko yendalo , iinwele zala maxesha ezinweleyo yinguqulelo yesitayile yohlobo oluqhelekileyo. Eyona nto ibunjiweyo eneenwele ezingqindilili, ihlala iyimfashini, ikhethe kakuhle kuye nawuphi na umntu onokuthi ayikhuphe.
Kunye ukubuna okanye unqumle amacala kunye neenwele ezinde ngaphezulu, umceli mngeni ophambili wesikhombisi se-quiff sisimbo sayo esomeleleyo. Nangona i-pomade elungileyo okanye i-wax inokwenza kube lula ukwenza isitayile, uninzi lwamadoda alunalo ixesha okanye amandla okusebenza nemveliso kunye nokuxubha iinwele kwindawo nganye ntsasa. Ngelixa le inokuba yimeko ye-quiff ende, abafana abafuna a ulondolozo olusezantsi kodwa iinwele ezithandwayo zinokufuna ukufumana imali encinci.
Iklasi, icocekile kwaye igqibelele kumadoda, i ikama ngaphezulu Isitayile esiguquguqukayo esiya kujongeka sikhulu emsebenzini okanye kubomi bakho bobuqu. Ukuba ukhangela iinwele zamadoda ezibabaza malunga nayo yonke imilo yobuso kwaye zinokunxitywa kuzo zombini izihlandlo ezisesikweni nezingacwangciswanga, ikama yokucheba iinwele kufuneka ibeyintandokazi yakho.
Kulungile iinwele zamadoda Akudingeki ukuba ube yindlela yakutshanje, yokunyanzela umda ukuze wenze ukuqaqamba, kwaye ikama ngaphezulu ngumzekelo obalaseleyo wokusika okuqhelekileyo okuye kwama uvavanyo lwexesha. Nokuba ufuna iinwele ezimfutshane okanye ezinde, ukuphela okanye ukusika emacaleni, okanye indawo enzima yokuchaza inkangeleko, ikama ngaphezulu linokukwanelisa iminqweno yakho. Kuyenzeka ukuba ibe yenye yezona zininzi iinwele zamakhwenkwe ezithandwayo !
Inkqubo ye- ndibuyele emva Inwele ye-retro ebonakala ilungile kuninzi lwabafana. Nangona olona hlobo luqhelekileyo sisixhobo se slick back undercut , zininzi iiyantlukwano ezisikiweyo- zonke ezijongeka zipholile ngeenwele ezimfutshane, eziphakathi okanye ezinde. Umzekelo, ungacela umchebi wakho ukuba a ukuphela kwetaper emacaleni endaweni yoko, okanye uthathe isigqibo sokutsiba okucekethekileyo, okukhazimlayo kokulungiswa kwento ebunjiweyo, iinwele ezixubileyo ngasemva.
Konke okudingayo ukuze ufezekise oku kujongeka ubuncinci zii-intshi ezimbini zeenwele, ibrashi yeenwele, kunye nemveliso yesitayile ekumgangatho ophezulu. Faka nje i-pomade, i-wax okanye udongwe kuyo yonke indawo, brasha imveliso emva kweenwele zakho, kunye nesimbo sokubonakala kwakho okungafaniyo. Ekugqibeleni, iinwele ezibuyile umva ilungele iingcali zeshishini okanye ubusuku obuqhelekileyo.
Ipompadour yayiyeyona nto ibalulekileyo kwindawo yokucheba iinwele kwiminyaka embalwa edlulileyo. Kwaye ngelixa i-pompadour ye-hairstyle ihlala ithandwa kwihlabathi leenwele zamadoda, iinwele zazigqithiswa yi-quiff. Izimbo zobungangamsha kunye nezothutho ziyafana ngokumangalisayo, zombini zinamacala amafutshane kunye neenwele ezinde ngaphezulu.
Ukuphela kwepompadour yeyona nguqulelo inqwenelekayo yokusikwa kuba amacala aphelileyo enza umahluko olungileyo. Isiphelo kukujongeka okungathandekiyo okungaphazamisi imigca kunye nevolumu yale nwele yeklasikhi. Ukuthaya ipompadour ingathatha ixesha, kodwa kufanelekile kwisitetimenti sefashoni.
I-mohawk yizinwele ezaziwayo zamadoda ezikhumbuza uninzi lwabafana ngee-punk rocker zabo ezizithandayo. Inguqulelo ehlaziyiweyo yesitayile isetelwe ukuba ibe kwifashoni njengesondlo esisezantsi kodwa isitayile esiqhelekileyo.
I-mohawk yale mihla ibandakanya utshintsho olwenzeka ngokuthe ngcembe phakathi kweenwele ezinde phezulu kunye namacala amafutshane nangasemva, kodwa isabandakanya ulwahlulo olwahlukileyo lweenwele ezishinyeneyo ezantsi embindini wentloko. Endaweni ye-mohawk evukelayo enamacala achetyiweyo, amadoda akhetha ukufumana i-taper fade.
Isitayile iinwele ezi-spiky inokukukhumbuza i-90's, kodwa iyinwele emfutshane enomtsalane yamadoda. Ngokudibanisa ukubonwa ngesixa esincinci sokubambelela okuqinileyo, i-matte pomade okanye i-wax, abafana banokuwususa lo msindo, wokucheba kweenwele.
Ukulungelelanisa ngakumbi isitayile sezinye iinwele ezipholileyo, shiya ubude obuninzi ngaphezulu kwaye ucime amacala. Mfutshane ukuya kubude obude obuphakathi kuya kukuvumela ukuba ufumane ikama ngaphezulu, i-faux hawk, i-quiff, ibrashi umva, kunye nezinye iindlela ezintle.
Isidiliya kunye nesintu, i Ivy League yenye into yokucheba iinwele ukuba nawuphina umntu angazikhupha ngaphandle kwemiyalelo enzima okanye umkhosi weemveliso zesitayile. Iimpawu ezahlukileyo zeenwele ze-Ivy League ziinwele ezimfutshane ngaphezulu, ukuphela okanye ukuthamba, kunye neenwele ezitshayelwe emacaleni ngaphambili.
Olona hlobo lweklasikhi nolunobunkunkqele ekunqunyulweni ludinga isitayile sendalo, esiqingqiweyo. Ukucheba iinwele ezicocekileyo zamadoda ezibotshelelwe kwiintlanganiso zeshishini nakwiminyhadala yoluntu, i-Ivy League lukhetho olufanelekileyo.
Yaziwa njengeenwele zomkhosi kunye ne ukusikwa kwe-buzz , abasebenzi abasikiweyo Isinwele esisesitayile kodwa esihlala sikho kule ndoda yanamhlanje. Ngelixa i-standard crew cut cut fade isenokungacengi kuzo zonke iimilo zentloko, ukubuza umchebi wakho ukuba ongeze umahluko omncinci kunqunyulwa (umzekelo, ukushiya iinwele ezinde ngaphezulu kwentloko) kunokwenza ukuba kufaneleke ebusweni bakho.
Nangona kunjalo, abasebenzi basika iinwele kukugcina okuphantsi, ukusika okucocekileyo, kwaye kuhlala kulula ukwenza isitayile, okwenza ukuba ilungele abafana abarhabaxa.
Ukucheba iinwele kuye kwaqina kwaye kuya kuqhubeka nokwanda ekuthandeni. Ngokukhetha umphetho wale mihla, amadoda afumana iinwele ezinde ezinokulungiswa kubume bobuso kunye nohlobo lweenwele.
Izitayile ze-Fringe zilunge kakhulu ngokudityaniswa nolusu oluphakamileyo okanye iiters ezisezantsi, kuxhomekeke kwisitayile sakho osifunayo. Iinwele zamadoda zikwayindlela entle yokubonisa izinto eziqaqambileyo kunye neenwele ezijijekileyo okanye ezigobileyo.
Izinwele ezinde phezulu kunye neeNdawo eziMfutshane kunye neendevu
Ngokudibanisa iinwele ezinde ngaphezulu kunye nentshebe kunye namacala amafutshane, le ndlela yobudoda ifezekisa ibhalansi elungileyo phakathi kweenwele zobuso kunye nentloko yeenwele ngaphandle kokwenza ukuba ubonakale ungonwabanga okanye ungcolile.
Ukubonakala kweklasi, ungazifaka iinwele entlokweni yakho kwi-badass slick back okanye quiff hairstyle, eyenza umahluko onomdla kwindevu erhabaxa. Ekugqibeleni, amadoda awakwazi ukungahambi kakuhle ekukhuleni kweendevu ezixineneyo njengoko abafazi befumana iinwele zobuso uphawu lobungqongqo kunye nobudoda.
Amadoda aneenwele ezi-wavy ayazi ukuba kufuneka achetywe kakuhle ukuze alawule kwaye aphathe izitshixo zawo ezingalawulekiyo. Kulungile iinwele zamadoda ezinenwele ezi-wavy ngabo babonisa iinwele zendalo.
Zama i-undercut ebhangqiwe kunye neenwele ezimfutshane ukuya eziphakathi ezishiya ubude obulawulwayo ngaphezulu kwentloko. Isityalo sase-France, i-fringe, i-slick back kunye necala elisecaleni linokubonisa iinwele ze-wavy kwaye zikunike isitayile esahlukileyo abanye abantu abanakho ukukhupha.
Iinwele ezinamakhonkco zinemfashini yendalo ekufuneka bezisebenzisile. Ukukhetha a iinwele ezigobileyo eshiya ubude obaneleyo kunye nevolumu iya kukunika ukujonga okuhle kunye nokubonisa isitayile. Ukuba unenkxalabo malunga neenwele zakho ezinqabileyo kwisitayela eside, i-pomade okanye i-cream efanelekileyo iya kunceda ukudambisa naziphi na iinwele ze-flyaway zokugqiba.
Ezona zinwele zilunge ngakumbi zibandakanya ikama ngaphezulu, umphetho, isandi, kunye nezitayile zobude obuphakathi. Ngokuqinisekileyo zama ezi zinwele zahlukeneyo zifutshane nezide ukuze ufumane uhlobo olulungele wena.
Iinwele ezinde zamadoda sele zixhaphake kakhulu kule minyaka idlulileyo. Ukusuka kwibhanti yendoda ukuya kwiqhina eliphezulu, iponytail, ubude begxalaba kunye nee-manes ezihambayo, abafana abaneenwele ezinde uneenwele ezininzi kunye neengcinga zesitayile onokukhetha kuzo.
Ukufumana okuninzi kwizinwele zakho ezinde, sicebisa ukuba usebenzise ishampu kunye nezinciphisi zamadoda. Iimveliso ezilungileyo ziya kondla iinwele zamadoda, zigcine zisempilweni ngokuqaqamba kwendalo. Kwangokunjalo, faka udongwe lomgangatho okanye isitayile sokwenza ubungakanani kunye nolawulo.
Imibala yeNwele epholileyo
Ukuba ngenene ujonge utshintsho kulo nyaka, linga ngeendlela ezahlukeneyo zombala weenwele. Ukusweleka kweenwele zakho kunokuba yeyona ndlela ilungileyo yokuzibonakalisa. Uninzi lwabafana aluyithathi idayi yeenwele okanye i-bleaching ukhetho olunenyani, kodwa ukutshintsha imibala yeenwele kunokuba yindlela elungileyo yokuqalisa ngokutsha.
Ngokukhetha okuninzi okumangalisayo, kubandakanya mhlophe , Iplatinum blonde, isilivere, mhlophe, kunye ngwevu, iinwele ezingacacanga zinokunceda ukwenza iinwele zamadoda ezigqibeleleyo kubuntu bakho. Nokuba ngowuphi umbala weenwele zakho zendalo okanye uburhabaxa, ukufumana umbala omtsha kunokuba yinyani kunwele lwakho lwesitayile.
Iinwele ezaziwa kakhulu zamadoda
Ukudibanisa okubhaliweyo okungaphezulu kokuphela
Ikama enombala ngaphezulu kwepompadour ijongeka intle, ngakumbi xa idityaniswe nefdd ephezulu kunye nomgca. Yongeza kwindevu epheleleyo yeenwele zobuso kwaye unenye yezona zinto zilungileyo zokucheba iinwele kulo nyaka!
Inkqubo ye- ifeksi (fohawk) yenza i-hairstyle eyoyikekayo nawuphi na umntu oya kuyithanda. Yintoni ebhetele nangakumbi yindlela ezi zinwele zigotyiweyo ezenziwe ngayo ukuze zenze i-badass fohawk iphele kwaye inzima.
Iinwele eziMessy eziMdaka ngeMid Fade
Enye indlela elula yokwenza isitayela seenwele ze-wavy kukuya nje kwi-hairstyle engcolileyo, engcolileyo. Ngentshebe engagadwanga, elona candelo licocekileyo lalo lisikiweyo kukuphela emacaleni.
Izinwele ezinombala oMdaka ngeSikhumba esiPhezulu esiFipileyo
Iinwele ezenziwe ngombala zonke zinomsindo kulo nyaka. Apha sinesinwele esipholileyo esinezinwele eziphakamileyo ulusu luyaphela .
Imfutshane emfutshane enefreyimu enefreyimu ephantsi
Eli qela lide lisikiweyo linomphetho omdaka. I-taper ephantsi iphela emacaleni icocekile kwaye intsha, kwaye ijolise amehlo kwisitayile sendalo seenwele ngaphezulu.
Ukuhla okuphezulu okuphelileyo kunye neQuiff
Imirhumo isoloko isesitayeleni, ibonelela ngokuthamba ngobunkunkqele kunye neklasi efanelekileyo eofisini okanye kubomi bakho boluntu. Phosa kwindawo yokuphola ephezulu yokuphola kunye nokumila, kwaye oku kucofa iinwele kushushu!
Ulusu olusezantsi luphela kunye noMgca oPhezulu kunye noMyalezo oPhezulu
Ngelixa le nywele inokubonakala ihlazekile kwaye ngaphandle kwesitayile, inyusa ezinye zeendlela ezishushu zonyaka. Ukuphela kolusu oluphantsi kudala umahluko kubude obude, obenziwe ngombala kunye neendevu zongeza iinwele zobuso ezinesitayile.
Iinwele ze-Hipster zaziwa ngokuba zi-stylish kwaye zipholile, kwaye oku kusikwa kuhambisa. Ngekhefu enesitayile ngaphezulu nangaphezulu nenxalenye ebukhali kunye nokuphela okuphezulu ecaleni, abafana bafumana ukujonga ngokuqatha okunemfashini kunye nokubi!
Ukubhrasha phezulu kwi-Fringe nge-Mid Bald Fade
Iibhulashi phezulu zilungele amadoda aneenwele ezithe nkqo, ezingqindilili. Idityaniswe nentshebe eneendiza kunye nebala elihle eliphakathi eliphakathi, le nwele yanamhlanje inobungcali kwaye iyonwabisa.
I-Textured Slick Buyela nge-Undercut
Intsha entsha etyibilikayo ebuyela umva yokwahluka kweenwele zeklasikhi. Umbhalo obhaliweyo endaweni yesitayile esine-oyile esekwe pomade, oku kujongeka kwe-dapper yenye yezona ndlela zipholileyo.
Crop Phezulu Ukucheba iinwele ngokuPhela okuphezulu
Ukucheba iinwele ezimfutshane kuye kwahamba nzima kulo nyaka, kwaye isityalo esingaphezulu siza kuqhubeka nokuhlala sikhetha abafana abathanda iinwele ezimfutshane. Isizathu esinye kukuba iinwele ezivunyiweyo zisebenza kakuhle kuzo zonke iintlobo zeenwele. Nokuba uneenwele ezingqindilili, ezigobileyo, ezi-wavy okanye ezithe nkqo, isityalo esinqunywe ngaphezulu nge-taper fade emacaleni yinto elula kodwa entle.
Ikama ngaphaya kwePompadour
Ukuxuba ikama ngaphezulu kunye nepompadour kubonelela ngesitayile sokwenza izinto ngokungafaniyo nabantu abathandayo. Iinwele ezilungileyo zamadoda aneenwele ezingqindilili, lo mzekelo ukwabonisa i-taper yeklasikhi kumacala ohlobo oluhle, oluhle.
Ukuhla kweFowunil ephantsi ngeMilo ePhakamileyo kunye nokuGqwetha
Oku kwehla okuphantsi kugxininisa ukujika okude ngaphezulu. Umgca ococekileyo ophezulu kunye neenwele zigcina ukusika kutsha.
Iinwele ezinde eziBrushwe ngasemva nge-Undercut
Njengengxenye yamacala amafutshane, ubude beenwele eziphezulu, le ndlela yangaphantsi kunye nebhulashi yangasemva ibonakala. Faka isicelo semveliso yeenwele ze-matte ezilungileyo eziphakathi ukuya kwindawo ephezulu kwaye unokunxiba iinwele zakho ngendlela efanayo.
Iinwele ezi-Wavy eziKhuselweyo eziPhezulu kunye neRazor High Fade
Le iinwele ezibrashiweyo zibonelela ngenkangeleko entle, entle kubafana abaneenwele ezi-wavy. Isarade fade ihambisa konke okungafaniyo okufunekayo.
Icandelo Elinzima elinokuLuphela okuPhakamileyo kunye neendevu ezigcweleyo
Icandelo leenwele zecala lijongeka njengangoku kwaye liphelile emacaleni. Inxalenye enzima echetyiweyo kukuchukumisa okumnandi, ukulungelelanisa isitayile ukuze ujongeke ngakumbi kwiinwele zendoda eqhelekileyo.
ikama asian phezu kokuphela
iinwele ezimfutshane amadoda amnyama
indlela yokuxelela uphawu lwakho lwezodiac
izitayela zeenwele ezipholileyo zamakhwenkwe
abadlali bebhola ukucheba iinwele